Abakhweli abafikayo eUganda ngoku basimahla ukuba baqhubeke emva kovavanyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseUganda » Abakhweli abafikayo eUganda ngoku basimahla ukuba baqhubeke emva kovavanyo
isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseUganda
Abahambi abafika eUganda
Ukulandela uxinzelelo lwabahambi kunye nokuhlaselwa kwemithombo yeendaba zentlalo, iSebe lezeMpilo lase-Uganda liye lanyanzelwa ukuba liginye ipayi ethobekileyo kwaye ligobe kuxinzelelo lwabakhenkethi kunye noluntu oluhambahambayo kwaye livumele abakhweli abafikayo ukuba baqhubele phambili kwiindawo zabo emva kovavanyo olunyanzelekileyo lwe-COVID-19 PCR. ukufika.
Oku kwakusemva kokuba umyalelo wokuqala osisinyanzelo ofuna abakhweli balinde iziphumo zabo xa befika kwisikhululo seenqwelomoya bahlangane nesiqalo esibi.
Abakhenkethi abaliqela babelane ngemifanekiso yobunzima babo kuWhatsApp, twitter, facebook, kunye namanye amaqonga eendaba ezentlalo emva kokulinda iiyure kwisikhululo seenqwelomoya.
Yayilihlazo kwishishini elisokola ukuphinda lakhe emva kweminyaka emi-2.
Ukugcina ubuso, okwesibini kwisithuba esingaphantsi kweveki, umyalelo wakhutshwa egameni likaRhulumente waseUganda. Eli lesibini, libhekiselwa njengemilinganiselo yezeMpilo ye-S23/21 COVID-19 yeSikhululo seenqwelomoya saMazwe ngaMazwe sase-Entebbe esisuka kwi-ofisi ye-Civil Aviation Authority Information Aeronautical Information Office e-Entebbe, ithatha indawo. Umyalelo wangaphambili we-SUP 22/21. Olu tshintsho luqala ukusebenza namhlanje nge-5 kaNovemba.
Umyalelo omtsha uthi:
1. Bonke abakhweli abafikayo kwiSikhululo seenqwelomoya saMazwe ngaMazwe sase-Entebbe baya, kungakhathaliseki ilizwe abavela kulo okanye imeko yokugonywa, kuvavanyo olusisinyanzelo lwe-COVID-19.
2. Ukwenzela lula, bonke abakhweli abafikayo kwiSikhululo seenqwelomoya saMazwe ngaMazwe sase-Entebbe baya kuthatyathwa iisampuli zabo ze-COVID-19 baze bavunyelwe ukuba badlulele kumakhaya abo okanye kwiihotele zabo ukuze bazimele bodwa de bafumane iziphumo zabo.
3. Iziphumo zovavanyo ziya kuthunyelwa kwiifowuni/ii-imeyile zabo.
4. Ukukhululwa kuphela koku:
- Abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-6.
-Abasebenzi benqwelomoya abanobungqina bogonyo olupheleleyo lwe-COVID-19.
5. Abakhweli abafunyaniswe bene-HIV baya kulandelwa liqela le- Ministry of Health Surveillance team.
6. Unyango lwabakhweli (5) ngasentla luya kulandela izikhokelo zonyango lwe-COVID-19 zoMphathiswa wezeMpilo.
7. Kwimeko yomkhweli obhaqwe ekufikeni kwakhe eneempawu ezibonisa ukuba usulelo lwe-COVID-19, uya kubekwa yedwa aze asiwe kwiziko likarhulumente lonyango.
8. Ukuze kube lula ukwenza lula kwisikhululo seenqwelo-moya saMazwe ngaMazwe sase-Entebbe, bonke abakhweli abangenayo kufuneka ngokwesinyanzeliso ukuba:
- Gcwalisa Ifomu ye-Intanethi yokuJonga iMpilo Iiyure ezingama-24 ngaphambi kokufika.
- hlawula i-US $ 30 kwi-intanethi Iiyure ezingama-24 ngaphambi kokufika.
9. Bonke abakhweli abafikayo kufuneka babonise kwiSitifikethi seSikhululo seSikhululo sezeMpilo, isatifiketi sovavanyo lwe-PCR esine-COVID-19 kuvavanyo oluthathwe kwiiyure ezingama-72 ukususela kwixesha lokuthathwa kwesampulu.
10. Bonke abakhweli abahambayo kufuneka babonise kwiSitifikethi seSikhululo seSikhululo sezeMpilo, isiqinisekiso sePCR esine-COVID-19 esine-COVID-72 kuvavanyo oluthathwe kwiiyure ezingama-XNUMX ukususela kwixesha lokuqokelelwa kwesampulu ukuya ekukhweleni. Baza kuthobela iimfuno zokuhamba zempilo kwilizwe abasingise kulo.
11. Abakhweli abafika ngexesha elibekiweyo, kunye/okanye abasuka kwizithili ezingaphaya kweKampala bephethe itikiti lenqwelomoya elisemthethweni kunye nepasi lokukhwela, baya kuvunyelwa ukuba badlulele kwiihotele zabo kunye/okanye kwiindawo abahlala kuzo.
12. Abakhweli abahamba ngexesha elibekiweyo, kunye/okanye kwizithili ezingaphaya kweKampala ngetikiti lenqwelomoya elisemthethweni, baya kuvunyelwa ukuba baqhubele phambili kwisikhululo seenqwelomoya abasingise kuso ngokunikezela ngetikiti lokuhamba kwabasemagunyeni njengobungqina bokuya kwisikhululo seenqwelomoya.
13. Abaqhubi kufuneka babe nobungqina bokuba bavela kwisikhululo seenqwelo-moya (njengetikiti lokupaka kwisikhululo seenqwelo-moya okanye itikiti lomkhweli) ukuze behlise okanye bakhwelise abakhweli.
14. Ukuthuthwa ngomoya kwentsalela yabantu ukuya elizweni kuvunyelwe ukuba le miqathango ilandelayo izalisekile:
– iSatifikethi sezoNyango seMbangela yokufa.
– Ingxelo yePost-mortem okanye i-Comprehensive Medical Report evela kugqirha/kwiziko lezempilo.
– Isatifikethi sokuqhola (kubandakanywa nesatifikethi sokuqholwa ngenxa yokubhubha ngenxa ye-COVID-19).
– Ikopi yencwadana yokundwendwela/yesazisi somfi. (Incwadana yokundwendwela/incwadi yokundwendwela/uxwebhu lokuzazisa kufuneka lunikezelwe kwabasemagunyeni abangenelelayo).
– Ilayisenisi yokungenisa elizweni/ugunyaziso lokungenisa elizweni oluvela kuMlawuli Jikelele weeNkonzo zezeMpilo.
– Ipakethe efanelekileyo – isongelwe kwingxowa yomzimba engangeni manzi emva koko ifakwe kwibhokisi enezinki enentsimbi kunye nentsimbi yangaphandle okanye ibhokisi yomthi.
– Uxwebhu luya kuqinisekiswa yimpilo ye-port, kwaye i-casket ekufikeni iya kuhlanjululwa yimpilo ye-port.
-Ukungcwatywa kwemizimba yamaxhoba e-COVID-19 kuya kuqhutywa ngokulandela iinkqubo ezikhoyo zokungcwatywa kwenzululwazi.
15. Ukuzisa amathambo oluntu kweli lizwe, kufuneka kufunyanwe imvume kuMphathiswa wezeMpilo neMicimbi yezaNgaphandle.
ETurboNews yasekwa ukuba i-Civil Aviation Authority (CAA) myalelo ngoku uxelelwe ngeengcebiso zizazinzulu ezivela Jikelele, iiNkonzo zezeMpilo, kunye neSebe lezeMpilo elikhokelwa nguMlawuli uDkt Henry G. Mwebesa.
Abakhenkethi baye bathandabuza malunga noMphathiswa wezeMpilo ukuba angayeki kuvavanyo olunyanzelekileyo xa efika, kunye nenkonzo igxininisa ukuba kunqandwe ukusasazeka kweentlobo ezahlukeneyo ze-COVID-19.
Ngomhla olandela umyalelo wangaphambili kwinkomfa yabezindaba nge-27 ka-Okthobha eyayibanjelwe kwisikhululo seenqwelomoya sase-Entebbe, uMphathiswa oHloniphekileyo wezeMpilo, uJane Ruth Achieng, wayezimisele ukuqhubeka nenkqubo yovavanyo yokuqala nangona imingeni ajongene nayo kwinkomfa yabezindaba, efana ne ukusilela kwemibhobho yesandisi-lizwi, izandyondyo zemvula, nokuxinana, xa sikhankanya ezimbalwa.
Ukungoneliseki ngokulinda emva kovavanyo, kwafumana ingqwalasela yamalungu owiso-mthetho kwiKomiti yePalamente yezoKhenketho eyabiza amagosa asuka kwicandelo lezokhenketho ukuba ajoyine i-Ofisi yoMphathiswa wezeMpilo (i-MOH), i-Uganda Civil Aviation Authority (UCAA), kunye nabanye abachaphazelekayo ababandakanyekayo ukuphunyezwa kovavanyo olusisinyanzelo ekufikeni, ukusebenzisana neKomiti yePalamente yezeMpilo ekhokelwa nguSekela Sihlalo, uMhlonishwa. Ssebikaali Yoweri, nge-4 kaNovemba ka-2021, emva koko bahlola amaziko kwisikhululo seenqwelomoya sase-Entebbe.
Abameli abavela kwicandelo lezokhenketho ibingu-Amos Wekesa weGreat Lakes Safaris kunye noCivy Tumisime, uSihlalo woMbutho wabaSebenzi boKhenketho base-Uganda (AUTO). I-Wekesa inike ingxelo yokurhoxiswa kwabaxumi abangafuniyo ukungena kwiimvavanyo kunye nokulibaziseka okungeyomfuneko ngelixa uTumusime esenza isicelo sokuba abakhenkethi abagonyiweyo abane-negative PCR (Polymerase Chain Reaction) uvavanyo kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokufika ukuze bavunyelwe ukuba baqhubeke besiya kwiindawo zabo ngaphandle kokuvavanya xa befika.
Ukuze bakhululeke kwaye bakhululeke kwishishini lezokhenketho ngokubanzi, uAchieng kunye neSebe lezeMpilo bazithoba kuxinzelelo.
Ubudlelwane phakathi koBuphathiswa bezeMpilo kunye nabasebenzi bokhenketho bebungavisisani ukusukela oko amacandelo abakhenkethi bethandabuza isizathu sovavanyo kunye nokuhlawulisa olo vavanyo kwisikhululo seenqwelomoya hayi kwezinye iindawo zokungena. Abakhenkethi batyhola icandelo lezempilo ngokwenza ingeniso ngeendleko zecandelo lezokhenketho. Kwelinye icala, icandelo lezempilo libajongele phantsi abakhenkethi, libagxotha ngokuphazamisana nomsebenzi wabo.
Kudliwano-ndlebe lukamabonakude kwi-NTV olwalandela lo myalelo, uMphathi weMicimbi yoLuntu ye-UCAA uVianney Lugya uvumile ukuba uyaluvuma uxinzelelo oluqhubekayo. Uthe: “Ukusukela ezinzulwini zobusuku, oko siqalise ukwenza eso sigqibo, bonke abakhweli bavunyelwe ukuba baqhubeke emva kokuba kuchongwe isampulu, kwaye baye bahamba ngeendlela zokungena nokufika. Saqala ngeEthiopian Airlines emva kobusuku; sikwanayo neRwandair ingenayo kwakunye neEgypt Air. Ngale ntsasa, silindele i-Uganda Airlines, iKenya Airways, kunye nezinye iinqwelomoya ezininzi, kwaye sisiqabu esikhulu kwisikhululo seenqwelomoya nakwinkqubo yezothutho lomoya.
Ngokumalunga neenkxalabo malunga nokulandeleka, uthe abasebenzi bezempilo kwisikhululo seenqwelomoya ukuza kuthi ga ngoku bavavanye abakhweli abayi-11,449 kwaye kwabo bangama-43 kuphela baye babonakala benethemba.
“Xa ujonga umfanekiso omkhulu ngokwezinto ebezisenzeka, abakhweli bayafika, kuthathwa isampulu, kwaye … balinde iziphumo malunga neeyure ezi-2 1/2. Thatha umzekelo womntu oye wabhabha esuka e-US - uhambo olusondele kwiiyure ze-20, kuquka nokuhamba. Lo ngumthombo wezinye zezikhalazo. Ngoko umntu osele ediniwe, uphantsi kokulinda. Baliqela abachaphazelekayo ababandakanyekayo kulo mba. Sisebenza ngokusondeleyo kunye nokhuseleko, iibhanki, i-NITA (iGunya leSizwe loLwazi lwezoLwazi) kunye nabanye.
“Siyivavanyile imeko, kwaye ngokwenene sinike eli cebiso. Ndingakunika umzekelo waseDubai apho uvunyelwa ukuba uye kwihotele yakho emva kokuba kuthathwe isampulu. Ndiye apho kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye nje ukuba ndifike kwihotele yam, ndafumana iziphumo.
“Sifumene ingxelo njengoko abakhweli bebekhalaza ngokulinda, kwaye oku bekutyhafisa abanye abakhweli ekuhambeni. Iimpawu zophuculo ukusukela oko lo myalelo uqalile ukusebenza zibone inkqubo engenamagingxi-gingxi nabanye abakhenkethi, bethetha phantsi kwemeko yokungachazwa kwamagama, benika ingxelo kubathengi babo kuthathe ixesha elingaphantsi kwemizuzu engama-20 ukucima neenkqubo kwaye baqhubeke.
Abakhenkethi bayakhuthazwa ukuba bhukisha kwi-intanethi kuvavanyo oluphambili apha.